Global Aawaj | यस्ता छन् रुख कटहर खानुका अचुक फाइदाहरु यस्ता छन् रुख कटहर खानुका अचुक फाइदाहरु
यस्ता छन् रुख कटहर खानुका अचुक फाइदाहरु
काठमाडौँ । हामीले खाने प्राय फलफुलहरूले हाम्रो शरिरलाई कुनै न कुनै रुपमा फाइदा गरिरहेकै हुन्छ । यस्तै हाम्राे स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदा मुलक फलफुलहरू मध्ये रुख कटहर एक हाे ।
नेपालको सन्दर्भमा रुख कटहर तराईदेखि पहाडसम्म पाइन्छ । यो फल विशेष गरी तरकारीमा प्रयोग हुने भएकोले धेरै उपयोगी मानिन्छ । काँचो छँदा तरकारी खाइने भए पनि पाकेपछि यसको फल खाइन्छ ।
यसमा भिटामिन ए, सी, थाइमिन, पोटासियम, क्याल्सियम, आइरन, नियासिन एवं जिंकजस्ता थुप्रै तत्व पाइन्छन् । यसमा फाइबर पनि प्रशस्त पाइन्छ । यसमा क्यालोरी हुँदैन । पाकेको कटहरको गुदीलाई राम्रोसँग मिचेर पानीमा उमाल्ने र सेलाएपछि एक गिलास पिउँदा शरीरमा ताजगी पैदा हुन्छ । यो मुटुरोगीका लागिसमेत उपयोगी मानिन्छ ।
यस्ता छन् रुख कटहरु खानुको फाइदा :-
जोर्नीको दुखाई :- कटहरको बोक्राबाट निस्कने दुधलाई सुन्निएको, घाउ वा काटिएको, फाटिएको अंगमा लगाएमा दुखाईबाट राहत मिल्छ । त्यस्तै जोर्नी दुखेमा कटहरको पातबाट निस्कने दुध लगाएमा राहत मिल्छ ।
रक्तअल्पताबाट बचाउछ :- कटहरको सब्जी वा यसबाट बनेको अचार आइरनको राम्रो स्रोत हो । यसको सेवनले रक्तअल्पताबाट बचाउनका साथै रक्त सञ्चार पनि सामान्य रहन्छ ।
आँखाको ज्योति बढाउछ :- यदि तपाईलाई पाकेको कटहर मनपर्छ र खाने गर्नुहुन्छ भने यसले तपाईको शरीरमा ताजापन ल्याउँछ । कटहरमा भिटामिन ए पाइन्छ, जसले आँखाको ज्योति बढाउछ र छालामा निखार पनि ल्याउछ ।
बलियो हड्डीका लागि :- कटहरमा पर्याप्त मात्रामा पाइने म्याग्नेसियमले हड्डीलाई स्वस्थ्य र बलियो राख्छ । यदि परिवारमा कसैलाई हाड सम्बन्धी समस्या छ भने प्रत्येक हप्ता कटहरको सेवन गराउनु उपर्युक्त मानिन्छ । यसले शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमतालाई पनि बढाउछ ।
दमका रोगीका लागि गुणकारी :- दमका रोगीका लागि कटहर रामवाणको काम गर्छ । काँचो कटहर उमालेको पानी सेलाएर पिउनुहोस् । नियमित रुपले यसो गर्नाले दमका रोगीलाई फाइदा हुन्छ ।
पाचन क्रियालाई तन्दुरुस्त बनाउछ :- कटहर सेवन गर्ने व्यक्तिमा अल्सर तथा पाचनसँग जोडिएका समस्या हुँदैन । कटहरमा फाइबरको मात्रा बढी हुने भएकाले कब्ज्यतको समस्याबाट टाढा राख्छ । कटहरको पात सुकाएर बनाएको धुलो अल्सरका रोगीलाई खान दिएमा राहत मिल्छ ।
अनुहारका लागि :- कटहरको दानालाई सुकाउनुहोस् र सुकेको दानालाई पाउडर बनाएर त्यसमा थोरै मह मिसाएर अनुहारमा लेप लगाउनुहोस् । त्यसको १० देखि १५ मिनेट राखेपछि मनतातो पानी र फेसवासले धुनुहोस् । यसो गर्दा अनुहारको दाग हट्छ ।
मुटुका लागि :- कटहरमा क्यालोरी हुँदैन, त्यसैले यो मुटुसँग जोडिएको थुप्रै रोगीका लागि फलदायी मानिन्छ । कटहरमा पोटासियमको मात्रा बढी हुने भएकाले पनि मुटु रोगीका लागि फाइदाजनक हुन्छ ।
रुपन्देहीमा बलात्कारको आरोपमा प्रहरीसहित २ जना पक्राउ
राँगोले हान्दा वृद्धको मृत्यु देशभरका ४० प्रतिशत इँटा उद्योग बन्द कोरोनाविरुद्ध खोप अभियान: सरकार गम्भीर नहुँदा चुनौती आजदेखि घर घरमा स्वस्थानी व्रत शुरु गरिँदै उद्योगीहरुको समस्याप्रति सरकार गम्भीर छ : अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्री कप : पुलिस क्लबलाई पराजित गर्दै एपीएफ फाइनलमा प्रेस यूनियन सुनसरीद्वारा ३२७ सञ्चारकर्मीलाई दुर्घटना बिमा सैनामैनामा भूमि आयोगको कार्य तीब्र लुम्बिनी अटोमोबाइल्सको प्रथम अधिवेशनका लागि तयारी पूरा प्रचण्ड-नेपाल समूहको विहीबार बुटवलमा प्रर्दशन, प्रचण्ड-नेपाल पनि बुटवल आउने नक्कली कुराको भ्रममा नपरौं ! तेस्रो जनआन्दोलनको तयारी गरौं ! खड्गप्रसाद गौचन मेमोरियल क्रिकेट : पोखरा एकेडेमीको विजयी सुरुवात शारीरिक सुगठन खेलमा रमाएका प्रकाश कांग्रेसद्वारा सिंहका हत्यारालाई कारवाहीको माग तीन दशककै अन्तरालमा तीन किसिमका उत्पादन रुपन्देहीमा आफन्तले जग्गा हडप्न हत्यारालाई दिए २५ लाखको सुपारी पाँचौँ संस्करणको ‘पोखरा स्पोर्टस् अवार्ड’ वैशाखमा मस्तिष्क घातबाट बेलायतमा नेपाली डाक्टरको निधन पर्वतमा साढे सात हजार मतदाता थप औषधोपचार गर्न व्यक्तिगत खर्च गर्नुपर्ने कैदीबन्दीको गुनासो